Malunga nathi -Hebei Senton International Trading Co., Ltd.
U-Hebei Senton yinkampani yorhwebo yamanye amazwe eShijiazhuang, China. Amashishini amakhulu abandakanya ukubulala izinambuzane ezisetyenziselwa ukubulala izinambuzane, Ukubulala izinambuzane, Ukulawula iimpukane, i-API kunye nabaphakathi. Ukuthembela kwiqabane lexesha elide kunye neqela elinamava. Sizimisele ukubonelela ngeyona mveliso ifanelekileyo kunye neenkonzo ezilungileyo zokuhlangabezana neemfuno zabathengi eziguqukayo. Ingqibelelo, ukuzinikezela, ukuqeqesheka, ukusebenza ngokukuko yimigaqo yethu esisiseko, eyimeko yokwenza ishishini. Siziqhelanisa nokuziphatha okuhle kakhulu. I-HEBEI SENTON, iqabane lakho elithembekileyo, masisebenzisane ukuze sibe nekamva elingcono!
Ngo-2004: Shijiazhuang Euren urhwebo co., Ltd. yasekwa njengenye yeeshishini lokuqala lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle e-China.
Ngo-2009: I-Senton yamazwe aphesheya yasekwa eHongkong njengokwandiswa kweshishini kunye notshintsho lweemfuno kwintengiso.
Ngo-2015: u-Hebei Senton urhwebo lwamanye amazwe., Ltd. yasungulwa eShijiazhuang Hebei China, ityalwe nguEuren (CHINA) kunye noSenton (HK) ukulungiselela ukuphuhlisa iimarike zamanye amazwe.
Ukuhambisa kwethu inkqubela phambili:
Inkqubo yokubonelela: Ummiselo wasekelwa ukuqinisekisa umgangatho wemveliso njengezinto ezisisiseko kwimveliso, inkqubo yovavanyo lokwamkelwa, ukuvavanywa kwezinto kuyafuneka kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezifanelekileyo zifumaneka kuphela emva kokuqinisekisa.
Inkqubo yoLawulo lweMveliso: Ummiselo wasekelwa ukuqinisekisa umgangatho wemveliso njengezinto ezisisiseko kwimveliso, inkqubo yovavanyo lokwamkelwa, ukuvavanywa kwezinto kuyafuneka kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezifanelekileyo zifumaneka kuphela emva kokuqinisekisa.
Inkqubo ye-QC: Ukugqibezela inkqubo yokugcina idatha ye-elektroniki,
Inkqubo yoluhlu: Njengoko inkqubo yokwamkelwa iqhubeka, abasebenzi kwindawo yokugcina izinto kufuneka bahlole ukuqinisekisa ukuba ileyibhile ikwimeko elungileyo kwaye umxholo welebheli usemgangathweni ngolwazi olupheleleyo, Inkqubo yokuqinisekisa kufuneka yenziwe ukuqinisekisa izinto azichaphazeki ngomswakama okanye zonakaliswe ziintshulube phantsi kothelekiso lokuthenga iphepha lokuhlola kunye ne-COA evela kumthengisi kubandakanya ulwazi lwegama lemveliso, imigaqo, ubungakanani, inombolo yebatch kunye nolwazi lomthengisi. Abasebenzi abagciniweyo bagunyazisiwe ukuba bazikhabe izixhobo ezingafanelekanga kwaye bazise umntu ophetheyo ekuthengeni.
Inkqubo yokuhlola ngaphambi kokuhanjiswa
Inkqubo yokuthengisa emva
Ungaqhagamshelana nathi ngezi ndlela zilandelayo.
Ifowuni: 86-0311-68001160 / 65